Bolice-ka gobolka Nugaal oo shaaciyay in ay rag u hayaan dhicii Xawilada Kaah – SBC
Bolice-ka gobolka Nugaal oo shaaciyay in ay rag u hayaan dhicii Xawilada Kaah
Posted by Webmaster on April 1, 2013 Comments
Ciidamada Police-ka Dowladda Puntland ayaa maanta Magaalada Caasimada ah ee GAroowe ku shaaciyay in ay qabteen ku dhowaad 2 nin oo lala xiriirinayo falkii dilka iyo dhaca isugu jiray ee ay kooxo hubeysani ka geysteen todobaadkii hore gudaha Magaala ganacsiga Puntland ee Boosaaso.
Waxa ay sheegeen saraakiisha ciidanka oo saxaafada lahadlay in labadan nin ay ugaga shakiyeen in ay ku lug lahaayeen dilkii iyo dhicii loo geystay xawaalada Kaah Express ee fariisinkeedii Boosaaso .
Talilyaha qeybta Police-ka Gobolka Nugaal Gaashaanle dhexe C/raxmaan Abshir ayaa saxaafada ugu qabtay gudaha Garoowe kulan saxaafadeed isagoo u sheegay in ragani ay qabteen markii ay soo galeen magaalada ka dib dabagal iyo baaritaan ay sameeyeenna ay ku tuuhmeen in ay dembigani galeen .
Barre Maxamed Cali iyo Mahad Cumar Bulxan waa labada nin ee la qabtay ee lala xiriirinayo falka dhaca iyo dilka isugu jira ee ka dhacay Xawaalada kaah waxaana u xaqiijiyay saxaafada in ay yihiin ragani rag ka mid ahaa dadkii dhacay xawaalada Taliye C.ramaan Abshir.
Sidoo kale taliyaha Qeybta Police-ku waxa uu sheegay in labadan nin ay dib ugu celin doonaan gudaha Magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga puntland kuna wareejin doonaan laamaha Amaanka degmada maadaama ay halkaasi ka geysteen falka .
27dii bishii ina dhaaftay ayay aheyd markii kooxo hubeysan ay dhac iyo dil ka geysteen Xaruntii Xawaalada Kaah Express, waxaana howlgalo kala duwan oo ay ciidamada Amaanku ku dhaqaaqeen sababtay in la soo qabto labadan nin iyo nin la sheegay in uu hogaankooda ahaa kooxda dhacday Xawaalada.